Abathengisi baseChina abaThengisi boLuntu oluCwangcisiweyo lwaBucala beFayile kunye nabavelisi | Weiti
Abathengisi abaThengisayo abaSebenzisiweyo belebheli yaBucala yaBucala
1, ulwandiso lwe-mink eyelash eyandisiweyo
2, Ubunzima 0.03 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.10 / 0.12 / 0.15 / 0.18 / 0.20 / 0.25mm
3, iCurl J / B / C / CC / D / D + / L.
4, Izinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nobugcisa obuzinzileyo
J / B / C / CC / D / D + / L I-Curl
Isampula yoku-odola iyafumaneka.
Ilebheli yabucala iyafumaneka. Samkela inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM.
Izinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nobugcisa obuzinzileyo, iinwele azinamatheli kwaye akukho ntsalela, kulula ukuyisusa, kulula ukuyisebenzisa, i-curl echanekileyo kunye nobude. Iiyure ezingama-24 emva kokuthengisa
I-0.05m kunye ne-0.07mm ubukhulu zezona zivatho ziphakanyisiweyo, ungabeka ukuya kwi-3 ~ 10 imivimbo enye kwinto enye yendalo ngaphandle kokonakalisa ukuqhuma kwendalo.
Olu hlobo lwe-lash lucwecwe kuphela kwi-1/3 yokugqibela yolwandiso, lwenza ukuba umzimba onqabileyo uzele kwaye ubonakale.
lt inokuguquguquka okuhle. ukuqina kunye nokuphefumla. lt ilula kakhulu kwaye ithambile.
Kuba yenziwe nge-faux mink, ilula kakhulu kwaye ibonelela ngombala omnyama ococekileyo. Enkosi ngokungakhanyi, inikezela ngenkangeleko yendalo.
Izandiso ze-eyelash zongeza ubude, ubukhulu, i-curl kunye nokugcwala kwimivumbo yendalo, ukuphucula ukonyusa kunye nokumila kwamehlo. Zifakwe ngokukodwa kwisiseko semeko nganye yendalo kunye neglu.
Eyona nto iphambili: I-eyelashes eyenziweyo eyenziwe ngaphambili ikunceda ukukhawulezisa inkqubo yeenkophe. Ngenxa yokuba awudingi ukwenza umtsalane we-eyelash ngesandla. Le fan yokugoba isebenzisa ukubambelela kokubambelela, akukho maqhina, kwaye inesiseko esifutshane kakhulu nesibhityileyo esingayi konakalisa i-eyelashes yendalo.
Malunga nobukhulu: Abanye amagcisa e-eyelash athi i-0.05mm kunye ne-0.07mm zibhityile kakhulu ukuba zingasetyenziswa. Nangona kunjalo, zithambile kwaye ziyindalo. Abomelele. Abanye abantu bathi i-0.10mm ibhityile, kwaye abanye abantu bathi i-0.10mm ityebile kodwa inzima kakhulu. Ngapha koko, uhlobo ngalunye lwee-eyelashes lunezinzuzo zalo. Itekhnoloji ye-Eyelash inokukhetha iinkophe ngokokukhetha kwabathengi. Iifeni ezikhethiweyo zingasetyenziselwa kunye nabalandeli beklasikhi ukwenza iiphakheji ze-hybrid.
Injongo: Ukugqibelela kwe-eyelashes. Le eyelashes zobuxoki ikakhulu zisetyenziswa ngabaculi be-eyelash, ngezinye izinto zokwandisa i-eyelashes, ezinje nge-tweezers, iglu yebanga lezonyango, iipads zejeli zamehlo, i-eyelash primer, i-mascara stick, njl. Faka isicelo kwi-1 eyelash ngexesha.
Isixhobo: Le eyelashes yenziwe nge-PBT emnyama, i-polybutylene terephthalate, ehlala iqinile njenge-polyester, kwaye iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu aphezulu kunye nezinyibilikisi ezahlukeneyo (ukhilimu okanye isicoci). Zithambile kwaye zilula, njengee eyelashes zakho. Ukongeza, yinto enobume bendalo.
Egqithileyo Ileyibheli yabucala iMagnetic Eyelashes engeyiyo ngeMagnetic Eyeliner
Okulandelayo: Yenza iilebheli zangasese zaBucala ezizimeleyo zoLwandiso lweFeksi ye-Mink eyelash
Ukufaka ii-eyelashes zobuxoki
Abathengisi boLwandiso lwee-Eyelash
ileyibheli yabucala eyandisiweyo
Yenza ileyibheli yabucala yaBucala yaBucala yeFa ...
eyeliner, Abathengisi bee-Eyelash, Izandiso zeEyelash, Imivimbo yamehlo, Imivimbo ye-mink, I-liner yamehlo,